Manchester City Oo Qosheeneysa Heshiis Isdhaafsi Oo Ku Saabsan Raheem Sterling Iyo Pedri
HomeWararka CiyaarahaManchester City oo Qosheeneysa Heshiis isdhaafsi oo ku saabsan Raheem Sterling iyo Pedri
Manchester City ayaa lagu soo waramayaa inay soo bandhigtay heshiis isku bedelasho ah oo ay la gasho Barcelona oo ay ku lug leeyihiin Raheem Sterling iyo Pedri .
Kooxda reer Catalan ayaa la filayaa inay gasho suuqa amaahda bisha Janaayo, sababo la xiriira dhibaatooyinka dhaqaale, iyadoo Sterling la rumeysan yahay inuu yahay mid ka mid ah bartilmaameedkooda koowaad.
Man City ayaa weli rajo ka qabta in 26-sano jirkaan uu saxiixo qandaraas cusub oo waqti dheer ah , mana rabaan inay arkaan weeraryahanka haddii aan la helin qiimihiisa €75m (£ 63.7m), taasoo Barca aysan awoodin.
Awood la’aanta Barcelona inay lacag badan ku bixiso suuqa kala iibsiga ayaa la macno ah inay bilaabi karaan heshiis isku bedelasho ah oo ay ku heli karaan xiddiga heerka caalami ee dalka England, wax ay isku dayeen xagaagii hore Ousmane Dembele , sida laga soo xigtay El Nacional , ka hor inta uusan xiddiga reer France dhaawac soo gaarin kaasoo diiday inuu heshiis dhaco.
Isla warbixinta ayaa sheegeysa in City ay sidoo kale xiiseyneyso heshiis macquul ah oo isdhaafsi ah oo ku lug leh Sterling, laakiin waa haddii ku guuleystaha 2021 Golden Boy Pedri uu u dhaqaaqo jihada ka soo horjeeda.
Pep Guardiola ayaa la rumeysan yahay inuu aad ula dhacsan yahay 18-jirka khadka dhexe, tababaraha Isbaanishka ayaana u furan inuu Sterling u dhaqaaqo Camp Nou haddii xiddiga da’da yar ee Barca uu yimaado Etihad Stadium si uu u noqdo bedelkiisa.
Pedri, oo sidoo kale lala xiriirinayo Bayern Munich , ayaa heshiis waqti dheer ah u saxiixay Barcelona bishii October, kaasoo ay ku jiraan €1bn (£842m) oo lagu burburin karo qandaraaskiisa.